यी पुरानो नोटको मुल्य लाख बढी पर्न सक्छ ! सेयर गरौँ भएकाले EBAY मा बेचौं ! « Nipolnews
यी पुरानो नोटको मुल्य लाख बढी पर्न सक्छ ! सेयर गरौँ भएकाले EBAY मा बेचौं !
जमाना यति छिटो परिवर्तन भयो कि मान्छे हरुले जे पनि अनलाइनमै काम गर्न लागे । अनलाइन बाट श्रीमती पाउँछन, अनलाइन बाटै नोकरी पाउछन भने पढाइ पनि अनलाइन मै हुन् थालेको धेरै भएको छैन । इन्टरनेटको दुनियामा खरिद विक्रीको प्रख्यात वेब साइट हरु हुन् eBay, OLX र quikr ।